Qiimaha Duulimaadyada ee loogu Dirayo Gegada Diyaaradaha Istanbul | RayHaber
[13 / 12 / 2019] Maalgashiga Magaaladda Istanbul wuxuu Helay Saamiyada Ugu Badan ee Miisaaniyadda 2020	34 Istanbul
[13 / 12 / 2019] Dhibaatooyinka Khadadka Tareenka ee Samsun Sivas ma dhammaato	55 Samsun
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDiyaaradda Turkish Airlines ayaa Kordhisay Qiimaha Duulimaadka Diyaaradda Istanbul
Diyaaradda Turkish Airlines ayaa Kordhisay Qiimaha Duulimaadka Diyaaradda Istanbul
21 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Waqtiyada duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa kordhiyay qiimaha tobnaad
Waqtiga Duulimaadka ee Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul oo La Kordhiyey… Qiimaha Duulimaadka Turkiga ayaa Kordhay; nidaamka gaadiidka hawada Faransiis ee marxaladda tijaabo ah "ku milmaan Point" ka iibiyey Turkey. Nidaamku wuu gaabiyey xilliyada duulista. Waxqabadka la rabay lama gaari karo markii 3 kun oo lala beegsaday taraafikada hawada ee kunka 200 maalin kasta ay kusii nagaadaan garoonka diyaaradaha Istanbul. Duullimaadyada oo dhan waa la dheereeyay. 10-15 wuxuu cunaa shidaal dheeri ah daqiiqad kasta oo dhammaan kharashaadka ku shaqeeya THY waa la labanlaabay.
SözcüSida ku xusan warbixinta Yuusuf Demir; Shirkadda Turkish Airlines waxay kordhisay waqtiga loo qorsheeyay duullimaadyada Ankara oo ugu dambeeyay 45 daqiiqadood garoonka Ataturk ilaa saacadaha 1 saacadaha 35 ee garoonka diyaaradaha Istanbul. Isbeddelkan, oo in ka badan laba jibaar sidii hore, ayaa sidoo kale si muuqata looga arki karaa websaydhka 'THY', shaashadaha macluumaadka duullimaadka iyo tigidhada. Markii la baaray, waxaa loo arkaa inaysan kaliya duullimaadyada ku tagaya Ankara, laakiin sidoo kale kor u kaca iyo hoos udhaca ku xiran garoonka diyaaradaha Istanbul la kordhiyey.
Waxaa shaaca laga qaaday in dib u dhaca uu sababay nidaamka cusub ee taraafikada hawada oo loo yaqaan “Merge Point an kaas oo lagu iibsaday riyooyin waaweyn oo Faransiis ah iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay keentay meesha iyo duruufaha jireed ee garoonka cusub. Nidaamka, oo lagu tijaabiyay garoomo diyaaradeed oo aad u yar oo ku yaal inta badan Aasiya iyo Afrika iyo laba Seoul iyo Norway, ayaa la bilaabay in la hirgaliyo markii ugu horreysay ee hawada sare iyo garoonka diyaaradaha ee 3 (Istanbul, Atatürk iyo Sabiha Gökçen).
duulimaadka garoonka diyaaradaha istanbul
Marxaladda koowaad, taraafikada la rabay kama helin nidaamka garoonka diyaaradaha Istanbul markii taraafikada hawada ay bartilmaameedsadeen inay gaaraan 2 kun maalin kasta ka dibna ay u gudbaan 3 kun oo kun oo 200s. Bixinta macluumaadka khubarada duulista hawada ee SÖZCÜ, si looga hortago dib u dhac ku yimaada hawada iyo goobta, si loo hubiyo amniga nidaamka lagu helay nidaamka, iyadoo la fulinayo, ayaa sheegay natiijooyinka kasoo horjeedda. khabiir ku ah ma doonayo inuu magiciisa, "nidaam cusub nidaamka aragti sax wadaagaan, laakiin ma la raaci Turkey. Way iska cadahay in wakhtiyada duullimaadyadu ayan gaabin, gaar ahaan gegada diyaaradaha ee Istanbul. ”
Oktay Erdağı, Kaaliyaha Guud ee Maareeyaha Guud ee Duulista Rayidka ayaa yidhi, sa Haddii nidaam noocaas ah la qaato, waxaa la filayaa in wakhtiga duullimaadyadu uu gaabin doono, badqabka duulimaadka wuu kordhayaa taraafiguna wuu sii badanayaa. Wax sidan oo kale ah ma jiraan. Markaa maxaa lacag badan ku baxay. Maalin kasta, dhammaan shirkadaha diyaaradaha, gaar ahaan kuwa Turkish Airlines, waxaa ku dhaca khasaare. Kani waa mashruuc ay suuq ka iibisay Eurocontrol. Waxay noo doorteen sidii doofaarrada Guinea. Soo jeestay ma ahan annaga. Lakiin nasiib xumo dib uma noqonayso ”.
Markii la iibsaday nidaamka, maareeyayaasha taraafikada hawada ee Maamulka Duulimaadyada ee Gobolka waxaa lagu tababaray Faransiiska qiyaastii hal sano. tiro badan oo ah shirar lagu qabtay meesha dhammaan dhinacyada ka qayb Turkey. Intii hawshani socotay, THY ama shirkadaha kale ee diyaaradaha ma helin wax diidmo ah ama soo jeedin ah oo isbedel ah. Nidaamku wuu shaqeynayey maalintii la furay maddaarka Istanbul. Hawada hawada ayaa la beddelay. Wadooyin cusub, habraacyo cusub oo ku soo dhowaada, nidaamyo cusub oo waddo-dhaw ayaa la soo saaray.
Nidaamka uu soo saaray Faransiiska ayaa la mid ah nidaamka labyrinth ee hoolalka xakamaynta baasaboorka. Si aad u gaarto booliiska, waa inaad saf ka gasho shaybaarka oo aad sawirtaa ana s birlikte iyo kuwa kaa horeeya. Markaa diyaarad ka ambabaxeysa Ankara oo dhammaysa soo degista daqiiqadaha 45, oo luminaysa ugu yaraan daqiiqadihii 10-15 ee mareegtan. Kaliya maahan inuu ku kharash gareeyo shidaal badan, kheyraadka shaqaalaha waxaa loo istcimaalaa si aan habooneyn, iyo kharashaadka howlgalka waa labanlaabmay.
PILOTS waxay dooneysaa "SHARO CUT"
Nidaamkan waxaa bixinaya kaalin weyn in la hubiyo in waafaqsanaanta madaarada mashquul Turkiga, hannaankii socodka gaadiidka hawada. Qiimaha ku shaqeynta shirkadaha diyaaradaha, gaar ahaan shidaalka, ayaa sare u kacay oo isu rogay culays. Duuliyeyaasha duulimaadyada toos ugu tagaya Atat directlyrk Airport ma fahmi karaan sababta ay ugu qasabtay inay u dhawaadaan dekada cusub, oo kaliya kiiloomitir u jirta 16-17. Duuliyeyaasha u soo dhowaanaya Istanbul inta badan waxay rabaan “goyn .. Markaa buu yidhi, yoksa hadaanu jirin qof i hor jooga, ha i tuurin.
MACLUUMAADKA CAAFIMAAD EE SIDII
Kororka waqtiga duulimaadka, heerka boqolkiiba Turkey 65 hawada isticmaalaya aagga sida saldhig oo isticmaalaya saamayn Airport Turkish Airlines Istanbul. Xitaa on duulimaadyada ugu gaaban, 10-15 waa dhibbanaha ugu daran ee nidaamka THY, kaas oo dib u dhac ku yimaada daqiiqado, sidaas awgeedna cuno shidaal badan, sidaas darteedna laban laabmaya dhammaan kharashyada hawlgalka. THY, oo iskudaya inay raadiso xal ay ku dhinto burburka, waxay xiriir la leedahay DHMI si ay u sawirto wado gaaban, gaar ahaan adigoo nidaamka qayb ahaan ku fidinaayo goobihi.
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul, Goobaha Duullimaadka ee THY…
Riyooyinka THY ayaa ku dhacay maddaarka Saddexaad
Arkas Logistics wuxuu TUSA u yahay Madaarka Istanbul
Amniga Duullimaadyada ee Madaarka cusub ee Istanbul…
Garoonka Diyaaradaha ee New Haven
Imtixaannada diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Duulimaad ka soo kicitimaya Erdogan oo ka dhacay Garoonka Diyaaradaha
3.Airport Waqtiga Duulista ee Bulgaria
Lahaa koobka qaramada Yurub ee Turkey Flight Network
Sida Looga Hirgeliyo Baaritaannada Xakameynta Duulimaadka Madaalada
Gawaarida bilaashka ah ayaa la kordhiyay ASTTI
Tikidhada Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Ankara ee Istanbul Ankara
Qiimaha tikidhada Tareenka Degdega ee Konya Istanbul
Duullimaadyada Diyaaradaha ee Madaarka Istanbul
Hay'adda Madaaradaha Gobolka
Meel isku dar